PTZOptics waxay soosaartay Maamulaha Joystick cusub | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » PTZOptics waxay soosaartay Maamulaha Joystick cusub
Downingtown, PA - Febraayo 17, 2021 - PTZOptics, oo ah soo saaraha hormuudka kaamirooyinka robotka tayada-baahsan ee baahinta, wuxuu ku dhawaaqayaa sii deynta PT-SuperJoy-G1 Joystick Controller, xal dhameystiran oo lagu taageerayo xakamaynta kamaradaha taxanaha ah iyo shabakada. SuperJoy wuxuu xakameynayaa wax soo saarka multicamera casri ah farta dadka isticmaala heer kasta oo karti ah. Isticmaalayaasha waxay lahaan doonaan xakameyn buuxda oo muuqaal ah wax kasta oo PTZOptics ama kamarad HuddleCamHD ah, iyo sidoo kale xakameynta Sony, Birddog, Newtek, iyo kamaradaha kale ee PTZ ee loogu talagalay dejinta xulashada.
“Ma jiro kiis adeegsi qalad ah oo loo adeegsado SuperJoy,” ayuu yiri Matt Davis, oo ah Injineerka Hoggaanka ee PTZOptics. “Waxaan u sameynay joystick-kan inaan 'si fiican ugu ciyaarno' isticmaalayaasha 'Mudanayaasha jira. Waxaan isku dayeynaa inaan ka dhigno mid caalami ah, inaan la shaqeyno qalab badan intii suurtagal ah. Meel kasta oo aad geynayso, tani runti waa inay ku habboon tahay xaaladda. ”
Riix badhanka riix-riixaya iyo Dayactirka Duulimaadyada
SuperJoy waxaa lagu qori karaa ilaa 255 PTZ kamarad hore ah, oo ay ku jiraan 9 “horudhac dhakhso ah” Isticmaalayaasha ayaa sidoo kale abuuri kara ilaa afar koox oo kaamerooyinka kaamerada u oggolaanaya inay si fudud u beddelaan muuqaallada. SuperJoy afarteeda badhan ee la hagaajin karo ayaa loo qorsheyn karaa in lagu kiciyo “super presets” oo gaadha meel ka baxsan kamarada, iyadoo loo dirayo amarro khaas ah oo loo maro HTTP, UART, TCP ama UDP qalabka ku saleysan shabakadda oo ay ku jiraan laydhadhka, ku hadlayaasha, iyo bandhigyada. Ficil ahaan qalab kasta oo lagu xakameyn karo IP-ga waxaa kicin kara SuperJoy.
SuperJoy wuxuu siiyaa xakameyn si ka baxsan booska kamaradaha iyo weynaanta. Adeegsiga badhannada kordhinta, hawlwadeenku wuxuu hagaajin karaa digsiga, foorar, dhaweyn kara, iyo xawaaraha hore. SuperJoy sidoo kale wuxuu leeyahay burooyin si daqiiqad loogu hagaajiyo si loo dhajiyo, diirada la saaro, iris / qalabka wax lagu xiro, iyo faa'iidada casaanka iyo buluugga ah. Awooddan si wanaagsan loo jaangooyo ayaa loo dheellitiray awoodda lagu dejinayo ilaalinno waxyaabaha kontoroolada laga heli karo. Dhismaha "qaabka aasaasiga ah" wuxuu joojiyaa inta badan xakamaynta marka laga reebo xakamaynta joystick-ka hal-abuurka ah iyo horudhaca, halka "qaabka matrixka" uu siinayo adeegsadaha awood u leh inuu ugu yeero horudhac ilaa seddex kamaradood. Si kastaba ha noqotee qaabka, SuperJoy wuxuu u ifiyaa badhamada la heli karo ee isticmaalaha. Qaababka aasaasiga ah iyo shaxda waxay u oggolaadaan mutadawiciinta iyo adeegsadayaasha layliska inay ka qaybgalaan wax soo saarka fiidiyowga iyagoon ka baqayn inay qalad sameeyaan.
Wejiyo badan, Awood leh, La heli karo
Hadda waxaa loo heli karaa in lagu dalbado $ 989 US MSRP, SuperJoy waxaa loogu talagalay in lagu xalliyo codsiyada ballaaran, cabbirada wax soo saarka iyo noocyada xirfadaha. Iyada oo leh waxyaabo badan oo horay loo soo dejiyey iyo awoodo isku hagaajin ah, xalkani wuxuu keeni karaa xitaa wax soo saarka ugu badan ee multicamera xakameynta. SuperJoy waxaa ku jira dammaanad xaddidan oo 2-sano ah waxaana hadda loo heli karaa horay-amar. Qeexitaanka sheyga iyo macluumaad dheeri ah, booqo ptzoptics.com/superjoy/.
Ku saabsan PTZOptics
PTZOptics waa soo saaraha rooga digsiga, janjeera, xalka kamaradaha xallinta ee barnaamijyada baahinta kala duwan, oo ay ku jiraan soosaarka fiidiyowga iyo socodka tooska ah. Waxaa la aasaasay 2014, PTZOptics waxay carqaladeeyeen warshadaha maqalka leh ee xirfadlaha ah markii koox injineero ah oo ka socda shirkad is dhex galka nidaamyada aadka loo ixtiraamo ay sameeyeen kii ugu horreeyay faylalka kamaradaha oo qayb ka ahaa aragtidooda ah in la abuuro "mindi ciidan swiss" oo loogu talagalay baahida adag ee muuqaalka muuqaalka. Xarunteeduna tahay Downingtown, Pa., Bilowgu wuxuu si dhakhso leh u madoobaaday qaar ka mid ah noocyada ugu waawayn ee kaamirada sii kordheysa ee PTZ. Iyada oo qaybinta caalamiga ah ee in kabadan 50 dal, PTZOptics waxay soo saartay ilaha hogaaminta warshadaha, oo ay kujiraan taxanaha tooska ah ee StreamGeeks. PTZOptics's Paul Richards wuxuu qoray buugaag badan oo sahamin ah oo ku saabsan mowduucyada kulul ee warshadaha, sida "Caawinta Tooska Kaniisadaada" iyo "Esports in Education." Kooxdiisu waxay sidoo kale soo saartaa Shir-madaxeedka Cibaadada ee Saddex-biloodlaha ah, kaas oo isu keena kumanaan hoggaamiyeyaasha kaniisadaha iyo mutadawiciinta adduunka oo dhan. PTZOptics waa shirkadda walaasha ah ee HuddleCamHD, soosaarayaasha kaamirooyinka shirarka fiidiyoowga xirfadleyda ah. Wax dheeri ah ka baro www.PTZOptics.com.
Chief Streaming Sarkaalka at PTZOptics
Paul Richards waa Madaxa Sarkaalka Cilmiga Guud ee PTZOptics. Richards waa qoraa Caawiya Kaniisadaada Live Stream, Esports in Education, Accelerated Broadcast Club Manhajka, iyo qoraalada kale ee tooska ula socda.
Dhejinti ugu dambeysay ee Paul Richards (arki dhan)
PTZOptics waxay soosaartay Maamulaha Joystick cusub - February 18, 2021
Ku bood Awoodahaaga Tooska ah ee Live StreamGeeks Summit - November 25, 2020
Buugga Tilmaamaha Soosaarka Tooska ah iyo Soosaarida Fiidiyowga oo la siidaayay si ay uga caawiyaan hiwaayad inay helaan Xirfadaha Heer Studio - October 2, 2020
Previous: Keenista Maalinta Australia nolosha fog
Next: Telefishanka Dayrta ee '2020 Fall' iyo 'Streaming Series' oo ku tiirsan Naqshadeynta Blackmagic